Carb ịgba ịnyịnya ígwè ọ dị mma maka ọnwụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Carb na-agba ịnyịnya ibu ka ọ ghara ibu ibu - otu esi ekpebi
Carb na-agba ịnyịnya ibu ka ọ ghara ibu ibu - otu esi ekpebi
Carb ịgba ịnyịnya ígwè ọ dị mma maka ọnwụ?
Ọ nwere ike inyere gị akahapụ ibu ibu? N'udo,carb ịgba ígwènwere ike inyere ndị mmadụ akahapụ ibu ibu. Agbanyeghị, ọ nweghị nyocha sayensị nke ugbu a na-atụ arocarb ịgba ígwèdị irè ma ọ bụ obere makaọnwụ ọnwụkarịa nri ndị ọzọ.Mar 30 2021
N’isiokwu a, aga m ekpughere ihe kpatara ịgba ịnyịnya na carbohydrates ji ka mma ma dịkwa mma karịa keto maka ndị gafere afọ iri anọ. Yabụ ọ bụrụ na ị nọ n’afọ 40, 50, ma ọ bụ 60, ị chọrọ iji isi ike tufuo abụba ngwa ngwa, ịchọrọ ịdị ogologo ndụ, ịchọrọ ịdị na-eto eto, na ịchọrọ idozi nsogbu ahụike nke oge a. Lezie anya nke ọma n'ihi na achọrọ m ịme ka ị mata ọhụụ ọhụụ, ọhụụ, otu ụbọchị iji megharia usoro nri nri nke ị nwere ike ịmụ site na ịpị ma ọ bụ ịpị njikọ dị n'isiokwu a banyere otu esi eme nri nri keto na-enweghị ahụhụ site na nsonaazụ hormonal nke m ga-eso gi kparita uka na whiteboard.
Ugbu a, mgbe ị gara na weebụsaịtị m, achọrọ m ka ị mata ihe ole na ole. Ọnụ ọgụgụ, ị ga-ahụ ụzọ ọmụmụ iri na abụọ dị iche iche bipụtara n'okpuru na ntụle aka na weebụsaịtị. N'ụzọ ahụ, ị ​​maara ihe niile m na-agwa gị n'isiokwu a na-akwado nkwado ndị ọgbọ, nyocha sayensị, nke e bipụtara.
Aha m bụ Shaun Hadsall. Abụ m 47 afọ-anwụ-ike abụba ọkachamara. Na mgbe afọ 25 nọ na ụlọ ọrụ a, amụtala m na ndị mmadụ karịrị 40 kwesịrị iri nri na iri nri dị iche karịa ndị na-eto eto n'ihi na etemeete ha dị ugbu a dị iche na ihe ndị dị ka keto na-eme ugbu a - n'agbanyeghị na ha na-arụ ọrụ, ọ nwere ike ịbụ mkpụmkpụ oge dị mkpirikpi bụ na ị na-ata ahụhụ site na ịdapụ hormonal na ibu ibu ngwa ngwa.
N'isiokwu a, m ga-eso gị kọọrọ gị otu ị ga-esi enweta uru nri keto niile a na-enweghị nhụjuanya ndị a. Ihe mbụ ị ga-ahụ n’elu ebe a bụ foto ahụ gị. Ama m na ọ bụ naanị igbe.
Mana achọrọ m ime ka nke a dị mfe. Aga m egosi gị ihe dị ka nri keto iji dozie ahụ na abụba. M ga-esokwa gị kerịta otu ị ga - esi merie ọdịda hormonal na - eso ya.
Ihe mbụ ị kwesịrị ịghọta bụ na ahụ gị na-echekwa ike sitere na carbohydrates dị na mọzụlụ na anụ ahụ imeju. Yabụ nke a bụ tankị nchekwa gị ma ọ bụ akwara gị na anụ ahụ imeju gị. N’ebe a, ị ga-ahụ ọkpụkpụ, anụ ahụ, na akụkụ niile na-emepụta mmiri ọgwụ.
Nnyocha na oke ibu na-egosi na ndị mmadụ karịa 40 na-elekwasị anya na homonụ na-efufu 65% karịa ndị na-elekwasị anya na idebe ahụ ha na calorie deficit site na ihe ndị dị ka nri keto. Ya mere, nke a bụ ebe ị ga-ahụ ebe ahụ gị na-echekwa abụba. Nke a na-echekwara abụba.
Ya mere, ihe na-eme na njedebe bụ na nri kwa ụbọchị, anyị ga-ejikarị na-eri nri carbohydrates kwa ụbọchị. Na oge ọ bụla anyị na-eri carbohydrates, ahụ anyị na-eji ha ozugbo dị ka ike, ma ọ bụ na-echekwa ha ozugbo dị ka ike n'okporo ụzọ ma ọ bụ na ị bụ, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnọdụ ala ma nwee nri buru ibu, nnukwu carbohydrate, ahụ gị ga-amalite ịme ndị ahụ youchekwa ike na anụ ahụ gị na anụ ahụ Imeju Mgbe ị na-eri nri ndị a kwa ụbọchị, glycogen a ga-emecha mejupụta mgbe ị na-adịghị agagharị ma ọ bụ na-emega ahụ. Ya mere, tank gị ga-ejupụta ozugbo.
Oge ọ bụla ị na-eri carbohydrate, ọ na-awụfu ebe a ma na-echekwa dị ka abụba, nke bụ ebe ihe dị ka nri keto na-abanye. Thelọ ebe niile nke nri keto kpochapụrụ ihe niile site na ịhapụ carbohydrates. Only na-eri naanị 5% carbohydrates.
Na-eri abụba enyi na enyi 75%, protein 20%, yabụ ị na-ewepụ glucose kpamkpam na atụmatụ gị, nke nwere ike igbu homonụ gị. Aga m agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara nke ahụ na nke abụọ, yabụ echiche niile ebe a bụ iji nweta nchekwa nchekwa ebe a site na carbohydrates niile kpochapụrụ na nri keto, yabụ ahụ gị enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị iji gbaa ihe dị ebe a ume. , n’ihi na o nweghi ihe dị n’ime ya, ọ ga-abịa ebe a. Ọ ga-amalite ịgba abụba maka ike.
N'ihi ya, ọ bụ ihe ịtụnanya aro ọnwụ atụmatụ. Agbanyeghị, sayensị na nyocha nyocha gosiri na mgbe otu izu gachara ụdị atụmatụ a, ọtụtụ nsonaazụ ọjọọ nwere ike ibilite. Ihe mbụ ga - eme bụ na ị belata homonụ thyroid gị.
Thyroid gị bụ isi gland na metabolism gị. Ọ na-achịkwa ibu ahụ gị. Ọ na-achịkwa ọsọ nke metabolism gị.
Ya mere, mgbe otu izu na-enweghị glucose na nri gị, ị na-ebelata usoro thyroid n'ihi na glucose bụ ngọngọ ụlọ nke TSA, hormone na-akpali akpali. Nnyocha na-egosikwa na ọkwa leptin nwere ike ịdaba dị ka 50% mgbe nanị otu izu nke nri a jiri otu ụbọchị nri nri na weebụsaịtị m ebe ị ka nwere ike ịnweta uru abụba abụba ndị a dị ịtụnanya na-enweghị n'okpuru mmetụta ọjọọ nke hormonal ahụ . Ma e nwere ogidi atọ maka etu esi arụ ọrụ a.
Achọrọ m ka mmadụ atọ ahụ kesara rig ht ugbu a. Ogidi mbụ bụ oge. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ nri gị nke ọma maka naanị ụbọchị atọ ma ọ bụ ise n'izu, ị nwere ike ime ka ogo hormone gị bawanye site na 1,000%.
Ihe omume ịgba ọsọ 2021
Ga-emekwa ka adrenaline na glucagon mụbaa. Hamonụ abụọ ahụ na-ahụ maka ịhapụ abụba echekwara n'ime n'ọbara ebe a ga-enye ya ahụ ike na-arụ ọrụ ma gbaa ya ọkụ, nke a makwaara dị ka sel na-abụ abụba ma na-ere ọkụ. Ihe nke abuo anyi ji eme ihe n 'ubochi nri m na weebụsaịtị m bu ihe oriri nri di iche iche n'ihi na o na enye gi ohere ijide insulin.
Cheta na mgbe insulin gị dị elu, ahụ gị enweghị ike iji abụba mee mmanụ. Ya mere, echiche niile bụ ikpokọta nri gị ka insulin wee kwụsie ike ka ahụ nwee ike ịnweta abụba n'ụzọ dị mfe dịka isi iyi mmanụ. Ugbu a ị na-ejikwa usoro cortisol gị, yabụ naanị ịnwe otu abalị ọ bụla Ọ bụrụ na ị na-eri nri nri maka nri abalị maka ị ga-eju anya ma nwee ọ enjoyụ, ị nwere ike ịhazi usoro cortisol gị.
Gịnịkwa? Nke a ga - enyere gị aka ịhapụ ọtụtụ melatonin na serotonin, nke ga - eme ka ụra buru ụra, nyere gị aka ịgbake ọzọ, ma hapụkwa homonụ uto mgbe ị na-ehi ụra. Ogidi nke atọ bụ nnukwu akwụkwọ kọfị. You na-emegharị T4 gị na T3 kwa izu.
See hụrụ, mgbe gị thyroid na leptin etoju na-ebelata, metabolism gị amalite nwayọ. Na-akwụsịlata nkwụsịtụ a na metabolism n'ihi na ị na-ejikarị glucose. Nke a bụ otu ị ga - esi mee ka T4 gị na T3 gbanwee, mee ka homonụ gị dịkwuo elu, ma mee ka leptin gị nwekwuo ike.
Yabụ nke a bụ akụkụ nke nri ụbọchị otu ihe ngwọta ị nwere ike ịchọta na weebụsaịtị m. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji asaa. Ọ bụrụ na ị ka na-ele, daalụ.
Echere na ị mụtara ihe na nke a. Lelee usoro m. Me Gwa gị nkwa, ọ bụrụ na ị gafeela afọ iri anọ ma nwee ọgụ ọnwụ na mgba - nkwa m na nkwa m kwere gị bụ nke a.
Ọ bụrụ na ịmee ihe ma jiri usoro usoro nri ụbọchị otu ma ọ bụ anọ n’izu ọ bụla, ọ ga-agbanwe ahụ gị kpamkpam. Nke ahụ ga-abanye n'ime akụkụ ọ bụla nke ndụ gị. Daalụ maka ikiri.
Kedu otu ị ga-esi ebu ibu na ịgba ịnyịnya ibu carb?
KB: 'Iwetulata ibuwere ihe dị ka izu 3-4 dabere na nri gị na ahụ gị. Mana, n'ihe gbasara inwe mmetụta dị mma ma nwekwuo ume,gịAga m amalitekamara ihe dị iche mgbe izu mbụ gachara.Sep 15 2020
Nri Carbhydrate na-agba ịnyịnya Carbohydrate
Kedu ka ịgba ịnyịnya carb si agba abụba afọ?
Ofkpụrụ nkecarb ịnyịnya ígwè bụeri oberecarbsmaka ụbọchị abụọ sochiri, na-esochi otu ụbọchị iri ọtụtụcarbs. Nke a pụtara na, dị ka ahụ gị echekwarakabuechekwadịa ga-agwụ agwụ, ndị dị elukabuụbọchịgamegharia ike gi ma mee ka ngwa ngwa gi na-aga, nke na-eduga karia nke ka ukwuuabụbamfu.
Kedu ka ị si agba okirikiri?
KeduMeeStart malitereCarb cgba ígwè?
Enwee ihe ndị macros. Kewaa calorie ndị ahụ n'etiti isi ihe ndị na-arụ ọrụ gị:carbs, protein, na abụba.
Ejirila eriri ya. Mgbe ị na-eri oberekabohaidret,imeJide n'aka na ị debere eriri ahụ.
Rie nri, ọbụlagodi obere-kabuụbọchị. Bụrụ gị na-agba ọsọcarbs, ma ọ bụ karịa kpọmkwem, na shuga shuga.
Ọnwa Ise 10, 2021
Linggba ịnyịnya ibu carb nwere ike ibute uru ibu?
Na-ewe oge ezumikeokirikiri carbs nwere ikenye aru gi ohere ka okuabụbakamacarbsna akwara anụ ahụ. Mana ọ dị mkpa icheta na ọ bụrụ na ị naghị emega ahụ ma ọ bụ ọzụzụ siri ikecarb ịgba ígwè, elu-kabuụbọchị nwere ike ime gịnweta ibu.Jul 20 2020bọchị 2020
Nwere ike iri nri aghụghọ mgbe ị na-agba ịnyịnya carb?
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nke a bụ usoro nri ị ga - ericarb ịgba ígwè, nke gụnyere ịgbanwe ụbọchị abụọ dị elu na obere carbohydrate maka ụbọchị isii yana gụnyere ụgwọ ọrụ ma ọ bụ “aghụghọ'ụbọchịnke asaa.16.03.2016
Kedu ihe bụ ezigbo usoro ịgba ịnyịnya ibu carb?
A na-ahụkarị kwa izucarb ịgba ígwènri nwere ike ịgụnye abụọ dị elu-kabuụbọchị, abụọkabuụbọchị atọ dị ala-kabuụbọchị. Nri oriri na-edozi ahụ na-adịkarị n'etiti ụbọchị, ebe nri abụba dịgasị dabere nakabuoriri. A elu-kabuụbọchị pụtara obere abụba, ebe ndị dị ala-kabuụbọchị dị oke abụba.12.06.2017
Bikgba ịnyịnya ígwè na-agba abụba afọ?
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-eme aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Kedu ụzọ kachasị mfe iji mee ka okooko osisi carb?
May nwere ike ịgụnye 'mba-kabu'ụbọchị, mgbe i nwere ihe na-erughị 30 grams nkecarbsmaka ụbọchị dum. Nhọrọ ọzọ bụ ịgbaso atụmatụ ebe ị nọrọ ụbọchị 3 na-eri obere ego nkecarbs: ihe dị ka gram 100-125 kwa ụbọchị. Mgbe ahụ, ị ​​na-eji ụbọchị 2 eri oke ego nkecarbs(175-275 grams) na ụbọchị ị na-arụ ọrụ karị.Jul 20 2020bọchị 2020
Keto ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ibu ka mma?
“Ọ bụrụ na ọ dị gịmmaapụ iri nricarbsoge ụfọdụ ma ọ dị ka ọ gaghị egbochi ibu gị,keto ịnyịnya ígwènwere ike ịbụ ihe dị mma maka gị. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị na-erite uru na-adịgide adịgideketo ma obuna-agbanwendianaobere carb(gburugburu 30-60 grams nke netcarbskwa ụbọchị), ”ọ na-akọwa.Nwa 9 2019
M ga-ebu ibu ma ọ bụrụ na m rie carbs?
Mee carbohydratesmee gịabụba? Nri ọ bụlanwere ikeakpataerite uru ma ọ bụrụgịrienke ukwuu. Ma nri gị ọ dị elu naabụbama ọ bụ elu nakabohaidret,ọ bụrụị ugboro ugborona-erepịakwaike karịa ahụ gị na-eji, ị nwere ikenweta ibu. Gram maka gram, carbohydrate nwere obere calories karịaabụba.
Kedu otu ịgba agba carb si arụ ọrụ maka ụkọ ọnwụ?
Linggba ịnyịnya ibu bụ ụdị nri na-eri nri nke gụnyere itinye ọtụtụ carbohydrates na ụbọchị ụfọdụ n'izu, mana na-eme ihe megidere ụbọchị ndị ọzọ: ịkpụ carbs dị ala iji wee belata ọnwụ.
Kedu nke bụ nri kacha mma iji gbaa ịnyịnya ígwè?
Carb ịnyịnya ígwè - na-eri ọtụtụ carbs naanị ụbọchị ụfọdụ n'izu- ekwenyere na ọ bụ otu n'ime usoro nri kacha mma ka ị ghara ibu ibu ngwa ngwa ma nweta ahụ ike n'ihi na ọ na-akpali ụfọdụ ọrụ nri na nke metabolism nke na-emetụta njikwa ibu.
Kedu ihe dị iche na etiti ịgba carb dị elu na obere ịnyịnya ibu carb?
Otu nri ị na-agba ịnyịnya na-eme kwa izu nwere ike ịgụnye ụbọchị abụọ dị elu, ụbọchị abụọ na-adịghị mma na ụbọchị atọ na-adịghị mma. Nri protein na-adịkarị n'etiti ụbọchị, ebe oriri abụba dịgasị dabere na oriri carb. Otu ụbọchị carb dị elu na-apụtakarị obere abụba, ebe ụbọchị obere carb nwere abụba dị elu.